भाइरल ज्वरो ? आत्तिनु पर्दैन
'भाइरसले हुने ज्वरोले घाँटीको दुखाइ र नाक बग्ने समस्या सँगै लिएर आउँछ,' वीर अस्पतालका फिजिसियन एवं लिभर युनिटका प्रमुख डा. अनिलकुमार मिश्र भन्छन्, 'भाइरल ज्वरोले बालबालिका र ठूलाबडालाई समानरूपमा प्रभावित पार्छ ।'
ब्याक्टेरियाभन्दा भाइरस १० हजार गुणा सानो हुन्छ । ब्याक्टेरियाबाट भएको संक्रमणमा प्रतिजैविक औषधि (एन्टिबायोटिक) प्रभावकारी भए पनि भाइरल संक्रमणमा भने एन्टिबायोटिक औषधिले छुँदैन । यसको उपचारमा केही एन्टिभाइरल औषधि मात्र छन् । मिश्रका अनुसार संक्रमण ब्याक्टेरियाबाट भएको हो वा भाइरसबाट भन्ने छुट्टयाउन भने गाह्रो हुन्छ ।
भाइरसले हुने संक्रमणअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिमा बिहान उठ्नासाथ टाउको, जोर्नी दुखाइ, छालामा बिमिरा लगायतका लक्षण एक्कासि देखिन सक्छ । भाइरल संक्रमण सास, खाना, शारीरिक सम्पर्क, किरा वा परिजीवीको टोकाइबाट मान्छेमा सर्छ । तर सामान्यतया भाइरल संक्रमणले नाक, घाँटी र फोक्सोको माथिल्लो भागलाई समात्छ । भाइरसको प्रकृतिअनुसार प्राथमिक संक्रमणको अवधि केही दिनदेखि लिएर केही सातासम्म रहन सक्ने डा. मिश्र बताउँछन् ।
भाइरसले मुख्यतः एक प्रकारको कोषलाई प्रभावित गर्छ । जस्तै, चिसो -रुघा) को भाइरसले माथिल्लो श्वासनलीलाई प्रभावित गर्छ । धेरैजसो भाइरसले भने सामान्यतया जन्मजात शिशु र बालबालिकालाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । 'सबैभन्दा सामान्य भाइरल संक्रमण नाक, घाँटी र माथिल्लो सास नलीको हो,' मिश्र भन्छन्, 'यो संक्रमणमा घाँटी दुख्छ, पिनास र रुघासमेत देखिन्छ ।' इन्फ्लुएन्जा भाइरल सास नलीको संक्रमण हो । बालबालिकामा भाइरसले गर्दा श्वासनलीको भित्री भाग वा हावाका अन्य नली सुन्निने समेत पाइएको छ ।
ज्वरो कम हुँदा समेत केही मामिलामा भाइरस बढ्दै रहन्छ जसले संक्रमण कायमै हुन्छ । अधिकांश भाइरल ज्वरो एक साताभित्र निको हुने गरेको छ । तर ज्वरो निको भए पनि बिरामीलाई कमजोरी भने केही सातासम्म अनुभव हुन सक्छ । चिकित्सक भने मात्र क्लिनिकल परीक्षणले भाइरल जवरोको निदान गर्न सक्छन् । पश्चिमी राष्ट्रमा जस्तो 'सेरोलजिकल' परीक्षण नहुने भएकोले हाम्रो जस्तो मुलुकमा भाइरसको गम्भीरता थाहा पाउन सकिँदैन । डा. मिश्र विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको अवस्थामा सरकारले भाइरोलजिकल प्रयोगशाला स्थापना गनर्ु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
'धेरैजसो भाइरसको संक्रमण दूषित हावामा सास फेर्नाले, दूषित पानी वा खाना सेवन गर्नाले वा सीधा सम्पर्कको कारणले हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'पहिले संक्रमण स्थानीय हुन्छ, पछि रगत वा लसिका ग्रन्थीमा जान्छ ।' भाइरल ज्वरोले कुनै पनि उमेर समूहकालाई हुन सक्छ । चिकित्सकहरूले यसको उपचार लक्षणका आधारमा गर्छन् । 'तपाईंको सम्पर्कमा भएका आफन्त रोगग्रस्त छन् भने तपाईंलाई समेत संक्रमण हुने सम्भावना पाँचगुणा बढ्छ,' मिश्र भन्छन्, 'भिडभाडयुक्त ठाउँ, अफिस, कक्षा कोठा, सार्वजनिक यातायात आदिमा संक्रमण सजिलै फैलिने गरेको छ ।'
भाइरल ज्वरोको उपचार लक्षणका आधारमा हुन्छ । 'एन्टिपाइरेटिक' र सिटामोल जस्तो 'एनालजेसिक' औषधि दिइन्छ । 'यो रोगको उपचारका लागि टन्न तरल पदार्थ खानुस्, पानीपट्टी दिएर ज्वरो तल झार्नुस, पर्याप्त आराम गर्नुस्,' डा. मिश्र भन्छन्, 'भाइरल ज्वरोबाट बच्न भने स्वस्थकर भोजनको उपयोग गर्नुपर्छ तथा संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहनुपर्छ ।' रोगी पूर्णरूपमा निको नभएसम्म स्कुल, क्याम्पस, अफिस वा कार्यस्थल जानु हुँदैन । रोगीले ५-७ दिन ओछयाउनामै सुत्नुहुन्न तर यो पनि ध्यान राख्नुपर्छ कि परिश्रम समेत बढी नहोस् । यो संक्रमण आफैँ निको हुन्छ । रोगीलाई ज्वरो कम गर्न पानीपट्टी, प्यारासिटामोल लगायत उपयोग गर्नुपर्छ । तीव्र ज्वरो निरन्तर रहिरहे उचित उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ ।
अनुसन्धानहरू अनुसार खोकी, रुघा, स्वाइन फ्लुसँगै भाइरसले फैलिने सबै रोग हात नधुँदा बढी फैलिन सक्छ । यी रोगले ग्रस्त वा रोगीछेउ बस्नेहरूले खानाअघि राम्ररी साबुनपानीले हात धोए यस्ता रोग फैलिनबाट ३० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिन्छ । हात धुनु 'हाइजिन एटिकेट' मा सामेल भए पनि कतिपटक खाना खानुभन्दा अघि र घरमा आएपछि हात धुन बिर्सन्छन्, जसका कारण रोगले फैलिने मौका पाउँछ । यसैले घर आएपछि सबैभन्दा पहिले साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । यस्तै रोगी व्यक्तिसँग भेटेपछि वा हात मिलाएपछि हात धुनुपर्छ । खाना खानुअघि त हात नधोई हुन्न । शरीरको प्रतिरक्षात्मक क्षमता कम भएको अवस्थामा 'सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल' संक्रमण भयो भने चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपयुक्त परीक्षण गराएर एन्टिबायोटिक औषधि खानुपर्छ ।
अन्ततः भाइरल ज्वरो भयो भने टन्न तरल पदार्थ सेवन गर्नुस, पूर्ण आराम गर्नुस, तपाईं छिट्टै निको भइहाल्नुहुन्छ ।